प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई तुलना गरेको भन्दै ऋषि धमलालाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई तुलना गरेको भन्दै ऋषि धमलालाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसादले भने,
ऋषि धमलाले पनि आचारसंहिता विपरित प्रमुख निर्वाच आयुक्तसँग प्रश्न गरिरहेको छ । तपाई प्रमुखसँग जुन कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर आचारसंहिता विपरित कुरा गरिरहनुभएको छ । अब हामीले तपाईमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ । तपाई अन्तरवार्ता लिँदा निश्चित सिमाभित्र रहेर लिनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले संसद र प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरी तीन महिनाअघि नै आचारसंहिता लागु गरेपछि सरकारका मन्त्रीहरु नै रुष्ट बनेका छन् । सरकार र दलहरुबिचमा सल्लाह नै नगरी आचारसंहिता लागु गरेर काममा नै बाधा पु¥याएको कतिपय मन्त्रीको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहिता लगाउने अधिकार आफुलाई भएकाले कसैसँग सोध्नु जरुरी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । यसै विषयमा ऋषि धमलाले टेलिभिजन कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख अयोधिप्रसाद यादवसँग अन्तरवार्ता गरेका छन् । कार्यक्रम धमलाको हमलामा गरिएको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुनावको मिति घोषणा हुनासाथ आचारसंहिता किन लागु गर्नुभएको ?
आवश्यकता भएर आचारसंहिता लगाएको हो । मिति घोषणा भएदेखि निर्वाचनको दिनसम्मको अवधि १२० दिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो अवधिमा आचारसंहिता लगाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको चुनाव नसकिदै संसद र प्रदेशको चुनावका लागि आचारसंहिता लगाउनभयो । दलका नेत र मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन् ?
विपक्षमा कोही पनि छैनन् । विपक्षमा उत्रिनु पनि हुँदैन ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार र अर्का मन्त्री वीरवहादुर बलायरले त आचारसंहिताप्रति असन्तुष्टी जनाइसक्नुभएको छ नि ?
मसँग कसैले पनि त्यस्तो कुरा गरेको छैन । तर निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउनका लागि आचारसंहिताभित्र रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । हामीले तीन महिनाभन्दा पनि कम समयको लागि आचारसंहिता लगाएका छौँ । यो आवश्यक छ ।
आचारसंहिताले गर्दा मन्त्रीहरुले सरुवा, बढुवा गर्न पाएनन् । हात खुट्टा बाँधियो भनेका छन् ।
अब सरकारले सरुवा, बढुवा त निरन्तर गरिरहन्छ । यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति त सरकारले नै घोषणा गरेको हो । व्यवस्थापिका संसदबाट बनाइएको कानुनमा पनि निर्वाचनको मिति १२० दिन अगाडि गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यो कुरा त सरकार, राजनीतिक दल र नेतालाई थाहा हुनुप¥यो नि ।
सरकार वा दलहरुसँग छलफल गरेर आचारसंहिता लगाउन मिल्दैनथ्यो ?
आचारसंहिता लगाउनका लागि हामीले कसैसँग पनि छलफल गर्नु पर्दैन । कानुनले हामीलाई अधिकार दिएकाले आचारसंहिता लगाउने क्षेत्राधिकार निर्वाचन आयोगको हो । कसैसँग पनि सोध्नु पर्दैन ।
निर्वाचन आयोग निरङ्कुश बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
कानुनको प्रयोग गर्ने कुरामा निरङ्कुश हुनुपर्छ । राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि यो राम्रो हुन्छ । तर कानुन प्रयोग गर्दा निरङ्कुश भयो भन्नु गलत हो । यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन । सबैले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।
एक महिनाअघि मात्रै आचारसंहिता लागु गरे भैहाल्थ्यो नि ?
उसोभए त आचारसंहिता किन लागु गर्नुप¥यो ? सबै दल र नेताहरुले आचरण राम्रो गर्ने हो भने छ आचारसंहिता नै चाहिदैन । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनका लागि नेताहरुको आचरण ठिक नभएकाले अचारसंहिता लगाउनुपरेको हो । सरकारले गर्नैपर्ने कामलाई हामी रोक्दैनौँ । आवश्यकता अनुसार आयोगले अनुमति दिन्छ । मन्त्रीहरुले अब नियुक्ति गर्न चाँही पाउँदैनन् । म पछि हट्दिन ।
प्रधानमन्त्रीलाई आचारसंहिता लगाउन सक्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ । अहिलेसम्म आचारसंहिताभित्र रहेर नै प्रधानमन्त्री हिँडिरहनुभएको छ । आवश्यकता अनुसार आयोगसँग अनुमति लिएर काम भइरहेको छ । तर चुनावी कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि हेलिकप्टर चढ्ने वा सरकारको साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने काम गर्न पाउनुहुन्न । मन्त्रीहरुले नै आचारसंहिता पालना गरेनन् भने हामी कारबाही गछौँ । प्रधानमन्त्री त संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आचारसंहिता पालना गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यस्ता कुरामा तपाईहरुले पनि पहरेदारी गरिदिनुस् ।
एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनेर २४ घण्टे स्पष्टीकरण लिनुभयो । तर प्रचण्डले राहत बाँड्दा केही गर्नुभएन । किन ?
माधवकुमार नेपाललाई हामीले सम्मान गरेका छौँ । तपाई प्रचण्ड र माधवजिको यसरी कुरा नगर्नुस् न । आचारसंहिताको अनुकुल र विपरित दुईवटा विषय छ । आचारसंहिताको विपरित गएर कसैले चामल बाँड्छ भने कारबाही हुन्छ । माधव कुमार नेपालले आचारसंहिता विपरितको काम गर्नुभएको थियो ।
प्रचण्डले चाँही चामल बाँडेर ठीक गर्नुभएको हो ?
कहाँ प्रचण्डसित जोड्नुहुन्छ ? ऋषि धमलाले पनि आचारसंहिता विपरित प्रमुख निर्वाच आयुक्तसँग प्रश्न गरिरहेको छ । तपाई प्रमुखसँग जुन कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर आचारसंहिता विपरित कुरा गरिरहनुभएको छ । अब हामीले तपाईमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ । तपाई अन्तरवार्ता लिँदा निश्चित सिमाभित्र रहेर लिनुपर्छ । प्रचण्डजिले कहाँ के गर्नुभयो, त्यो हामीसँग आउनुप¥यो नि । प्रत्येक जिल्लामा हाम्रा कर्मचारी छन् । प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले एक्सन लिन्छ ।
कार्यक्रम धमलाको हमलामा भएको अन्तरवार्ता :